१९ वर्षकी ५ महिनाकी गर्भवती पत्नि रञ्जुलाई राम श्रेष्ठले के गरे यस्तो ? पत्निको हत्या गरेर प्रहरीलाई फोन गरे, हेर्नुहोस् – Taja Khawar
१९ वर्षकी ५ महिनाकी गर्भवती पत्नि रञ्जुलाई राम श्रेष्ठले के गरे यस्तो ? पत्निको हत्या गरेर प्रहरीलाई फोन गरे, हेर्नुहोस्
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ३२, २०७८ समय: १:२५:२७
श्रीमती राम श्रेष्ठलाई आफ्नै १९ वर्षकी श्रीमतीको ज्यान लिएको अभियोग लागेको छ । श्रीमती गर्भवती समेत रहेको खुलेको छ । उनी ५ महिनाकी गर्भवती थिइन् । उनले वयानका क्रममा घटना स्वीकार समेत गरेका छन् । श्रीमती रञ्जु तामाङ को ज्यान लिएर उनले आफै प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
उनले भने, मैले घटना गराएको हुँ म भागेको छु र ? समाजका ब्यक्तिलाई यसो भनेका थिए । उनले आफै खबर गरेर प्रहरी बोलाएका थिए । प्रहरीले खबर पाएपछि घटनास्थल पुगेका थिए । त्यसपछि उनलाई पक्राउ गरेर लगेको छ । प्रहरी घटनास्थल पुग्दा राम ढोका थुनेर बसेका थिए । रञ्जुको बुवाले पोष्टमार्टम पछि मात्र छोरी गर्भवती भएको देखिएको बताए ।
पोष्टमार्टम पछि उनी गर्भवती भएको खुलेपछि दुई शवलाई अलग अलग ल्याइएको थियो । यो काठमाडौमै भएको घटना हो । उनीहरुको विवाह एक वर्ष अघि भएको थियो । विवाह पछि उनी माइतीको सम्पर्कमा आएकी थिइनन् । माइतीको अनुसार उनलाई श्रीमानले नै ब न्धक बनाएको कारण उनले सम्पर्क विहिन भएकी थिइन् । उदयपुर माइत जान तयारी गरेकै बेला रञ्जनाको घटना भएको माइतीको भनाई छ ।
काठमाडौको बौद्ध स्थिती जम्बु डाँडामा रञ्जुको अन्तिम संस्कार गरिएको छ । साउन २६ गते राती राम श्रेष्ठले घटना गराएपछि प्रहरी बोलाएका थिए । माइतीले घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्न माग गरेका छन् । विवाह पछि एक वर्ष सम्म सम्पर्क विहिन भएकी छोरीको यस्तो घटना भएको सुनेपछि माइती पक्ष हतारिदै काठमाडौ आएका थिए । राम र रञ्जुको उमेरको फरक पनि निकै धेरै थियो । उनी झण्डै ४० पुग्न लागेका छन् । उनीहरुको सामाजिक सञ्जालकै मार्फत भेट भएको र प्रेम पछि विवाह गरेको माइतीको भनाई छ ।
Last Updated on: August 16th, 2021 at 1:25 am
ससुरा बितेर एक्ली बनेकी सासूलाई नाँचेरै खुशी बनाउने छोरी जस्तै यी बुहारी (भिडियो सहीत)
राती केटा’हरुले संगै जाऊ भन्छन तर पनि नड’राइ काम गर्छन ! साहसी ट्याक्सी चलक महिला – भिडिओ